Halkan ka akhriso wareysigii Getachew Reda, ee tigreyga – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Halkan ka akhriso wareysigii Getachew Reda, ee tigreyga
Halkan ka akhriso wareysigii Getachew Reda, ee tigreyga
Liselott Lindstrom oo ah wariye ka socota warbaahinta Yle ee Finland oo la kulantay mid ka mid ah ragga loogu baadi goobka badanyahay Itoobiya ee ku dhuumaalaysanaya buuraha fog fog ee Tigray.
Halkan ka akhriso maqaalkii ay ka qortay kulankeedii Getachew Reda:
Tigray/ Addis Ababa. Waa nin ku dul fadhiya kursi loox ah oo gacanta ku haysta koobyar oo bun Itoobiyaan ah. “Malab saafi ah runtii, waa wax aad u fiican! Sidaas ayaa uu yidhi isaga oo malqacad tiigsanaya. Waxa miis yar u dul saaran maddiibad malab saafi ah.
Ninku waa Getachew Reda, wasiirkii hore ee isgaadhsiinta Itoobiya, imika na ah hogaamiye jabhadeed kana mid ah raga aad ka loo baadi goobayo Itoobiya oo dhan. Imika waxa uu fadhiyaa tuulo yar oo buur ku taalla isaga oo sita moobil dayax gaxmeedka ku xidhiidhsan, waxa aanu qorshaynayaa sidii jabhaddu u sii wadi lahayd dagaalka.
Dagaalka gobolka Tigray waxa uu bilaabmay Bishii Noofambar ee sannadkii hore, ka dib markii garabka hubaysan ee TPLF weerar ku qaadeen xarumihii Federaalka ee gobolka Tigray. Aargoosigii dawladda dhexe kaga falcelisay waxa la saadaalinayay in uu kusoo af jarmo maalmo ama todobaadyo oo ahayd sida uu yidhi Raysal Wasaare Abiy Axmed. Hase ahaatee, durba waxa laga joogaa siddeed bilood, dagaalkii gobolka Tigray na waa uu sii qadhaadhaanayaa tan iyo Noofambar.
Getachew Reda waa xubin ka mid ah TPLF, u jeeddada u weyn ee Federaalku ugu jiro dagaalkuna waa in isaga iyo hogaamiyaasha kale la soo helo oo la xisaabiyo. Sidaas ayaa uu Raysal Wasaare Abiy Axmed ugu magaacabay Getachew iyo saaxiibadiis ba danbiilayaal.
Ururka TPLF waxa ay Itoobiya hab cadaadis iyo caga juglayn ah ku soo xukumayeen wax ku dhaw soddon sanno. TPLF waxa ay ku guulaysatay in ay xukuumaddii Shuuciga ahayd ka tuurto talada, sidaas ayaanay TPLF ku hogaamisay dalka iyada oo tacaddiyada ka dhanka ah xuquuqda bani aadamka iyo xidh-xidhidda kuwa mucaaradka ah iska noqday wax caadi ah oo u dhaqan ah.
Waqtigii TPLF waxa uu soo afjarmay ka dib mudaharaadyo ballaadhan, iyada oo Baarlamaanku isku raacay in Abiy Axmed loo doorto Raysal Wasaare sannadkii 2018. Salaasadii dhaweyd, Itoobiya waxa ka qabsoontay doorashadii ugu horraysay ee Dimuqraadi ah tobanaankii sanno ee u danbeeyey, waxaana la filayaa in Abiy Axmed guulo ka soo hooyo. Hadda Abiy Axmed iyo TPLF na waa col daahii go’ay.
Sababata u weyn ee loo aanayn karo siyaasadda Abiy uu ku doonayo in maamulka lagu soo ururiyo dawladda, lana yareeyo awoodda maamullada gobollada ayaa ah in markii Abiy isku dayay bishii Ogosto in uu dib u dhigo doorashooyinka, Gobolka Tigray ku gacan saydhay oo go’aansaday in uu qabsado doorasho u gaar ah iyaga, sidaas ayaanay TPLF ku heshay badanka codadkii la dhiibtay ee gobolka, se dawladda dhexe ma ansixin natiijada.
“Waxa aanu u dagaalamaynaa awood iyo maamul dhamaystiran oo dadka Tigray helaan, se cadawgayagu ma joogsanayo heer ay baabi’iyaan dadka Tigrayga dhamaantood”. Sidaas waxa yidhi Getachew.
Getachew waxa uu waraysiga ku bixinayaa bannaanka beeryar dhexdeeda. Waa uu guur-guuraa si aa xukuumaddu u helin, imikana waxa uu tuulo yar la joogaa qoys beeraley ah. Sideeda ba, TPLF waxa ay ku tiirsantahay kaalmada bulshada waxaana ay ku haystaan caawimaad badan.
Hooyada qoyska uu la joogo ayaa tidhi: “ciidamada Ereteriyaanka ayaa wax kasta ka qaatay ciidamada TPLF oo todobaadyo ayay iska dhex joogeen tuuladan, waliba si gaar ah Getachew waxa uu waayay Soolartiisii”.
Imika keli ah halkan waxa jooga ciidamada TPLF, ama sida ay iyagu jecelyihiin in loogu yeedho TDF, Tigray Defense Forces (Xooggaga Difaaca Tigray). Waana garabka hubaysan ee TPLF oo doonaya in ay magac cusub ku soo caan baxaan dhallinyaro cusub na qortaan.
Waxa muuqata in TDF taageero xooggan ku haysato miyiga gobolka Tigray, shacab bandanna waxa ay aamineen in dagaalku hayay waxa keli ah ee ay ku badbaadi karaan, laguna badbaadin karo qaranka oo dhan.
Teheras Tsega Berhan oo 20 jir waxbarashadiisii uga hadhay si uu ugu soo biiro jabhadda ayaa yidhi: “aad baan uga werwersanahay dagaalkan, se waxa aan doonayaa in aan la dagaallamo kuwii waxan nagu sameeyey. Dhallinyar badan ayaa sidaa iigu soo hiran doonta”.
TPLF waxa si weyn loogu dhaleecayn karaa in ay qaraxyo waaweyn geysteen bishii Noofambar, se aargudashada dawladda dhexe ayaa ahaa mid aad u arxan daran. Sidoo kale waxa dagaalka soo farageliyey xoogaga Ereteriya oo si gaar ah loogu eedeeyey xasuuq iyo in ay kufsiga u adeegsadeen hub ahaan.
Boqolkiiba sagaashan dadka degan Gobolka Tigray waxa ay u baahanyihiin cunto iyo gargaar, Qaramada Midoobay na waxa ay ka digtay macaluul ku habsata gobolka. Askarta waxa lagu dhaleeceeyey in ay dadweynaha deegaanka gaajaysiinayaan iyaga oo baabi’inaya dalagii ay beerteen. Sidoo kale waxa laga digayaa isir sifayn ka dhacda gobolka.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Finland Pekka Haavisto ayaa dhaleecayn xoogan la kulmay todobaadkii u dabeeyey ka dib markii uu ku sheegay waxa ka dhacaya gobolka xasuuq. Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya ayaa si adag u dhaleeceeyey Pekka kuna tilmaamay hadalkiisa: “hadal masuuliyad darro ka muuqato oo aan diblumaasiyad ku dheehnayn”.
Si guud doorashada ereyada ku habboon xaaladaha taagan waa kuwo xasaasi ah. Caasimadda addis ababa, Wasiirka Arrimaha Dibadda ayaa xanaaqay ka dib markii loo adeegsaday kalmadda “dagaal” waxa ka socda gobolka. “maaha dagaal! Waa sharci marin, haddii qof sharciga jabiyo soo in la ciqaabo maaha? Ayaa uu yidhi Wasiirku. Waxa uu ku adkaysanayaa in hawlgalku dhamaaday ee keli ah waxa Gobolka Tigray ka socdaa yahay dib-u-dhis. Se, maalmo ka hor hadalkiisa dad ayaa tarab tarab ugu le’day duqaymo dawladdu ka geysatay gobolka. Hase ahaatee Wasiirka ayaa ka dhex galay su’aal ku saabsan arrinkaas oo la weydiiyey.
“Ma xaqiijin karo xogtan aad la timid, sababtoo ah anigu meesha maan joogin mana aan arag, markaas su’aalo noocaas oo kale ah ha i weydiin. Ma garatay? Ayaa uu ku yidhi Wasiirku qofkii is lahaa wax ka weydii duqayntaas.
Buuraha Tigray waxa ka taagan sansaan colaadeed, waxaana la maqlaa hugunka rasaasta. Dagaalku waxa uu noo jiraa oo ka socdaa 15 mayl. Getachew waxa uu doonayaa in aan lugayno oo aan soo fiirinno ciidamadiisa. Waxa markiiba aan arkay shiishyahan dhulka jiifa oo isha ku haya dooxada. Tehran Tsega Berhan waxa uu qaabilayaa askarta ka soo laabta dagaalka. Waxa kale oo aan arkay nin dhallinyar ah oo xabbadu garabkiisa ka dhex booddayoo geed hoostii lagu dhaawac tirayo. Tehran laftiisa bishii Diisambar ayaa xabbad haleeshay,se hadda waa bogsaday dhaawicii gacanta ka soo gaadhay.
“Xerooyinka cisbitaal ee TDF ma haystaan qalab caafimaad oo ku filan”. Waxa sidaas yidhi Getachew.
Getachew waxa uu ku tilmaamayaa Raysal Wasaaraha Abiy Axmed oo ah nin ku guulaystay Abaal Marinta Nabadda Adduunka “mid aan waxba qori Karin waxna akhriyi Karin oo jaahil ah, una harraadan awood iyo talin”. Si gaar ah waxa uu Getachew uga xanaaqsanyahay in TPLF cadaw daahii go’ay la tahay Isias Afawerki, madaxweynaha Eretariya oo ciidamo u soo diray Itoobiya.
“Abiy laftiisu waxa uu rabaa in uu kali-taliye kale oo gobolka ka jira noqdo, se dagaalkan waa kii uu Qaranka Itoobiya ku burburayay” sidaas waxa yidhi Getachew. Sidoo kale, Getachew waxa uu qirtay in TPLF qaladaad badan gashay intii ay xukunka haysay. Si kasta oo ay ahaata ba, waxa uu xusay in horumarka dhaqaale ee Itoobiya ay gaadhsiiyeen loogu mahadnaqay.
“Annagu danbiilayaal ma nihin, haddii se dad cabasho naga qabaan waanu ku faraxsannahay in aanu uga jawaabno” ayaa uu sidoo kale yidhi. Gariirka hubka culus ayaa qabsaday aagga dooxada aanu ku sugannahay, Getachew ayaa na yidhi: “xaalladan aad goobjoogga u tahay waa dhamaadka cutubkii koowaad, cutubyo kale ayaa na si dhokhso leh u soo socda mana aha wax aanu joojin karno.
TDF todobaadkan oo keli ah waxa la soo sheegay in ay tuulooyin dhawr ah dib u qabsadeen.
Gariirka hubka ee dhegaha ku soo dhacayaana ma baqo gelinayaan 20 jirka Tehran. “waxa aan u dagaalamayaa gobolkayga. Waan u dhiman karaa. Waxaaba jira kuwo badan oo dalal shisheeye ka dagaallama iyaga oo aan lahayn u jeeddo, se anigu waxa aan leeyahay u jeeddo aan u dhinto sidaas darteed kama cabsanayo dhimasho” sidaas ayaa uu yidhi.
Waxaa Turjumay: Maxamuud Bulxan.
Previous articleDariiqa Gaadhidda Guusha
Next articleXildhibaan Cabdirisaaq Khaliif Afar Shay Ayaa U Saamixi Kara Inuu Hanto Jagada Gudoomiyaha Golaha Wakiilada